မန်စီးတီးဝန်ထမ်းတိုင်းကို တန်ဖိုးကြီးနာရီဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် ကားသစ်လည်းမဲဖောက်ကာကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အဂူရို – Play Maker Sports Journal
မန်စီးတီးဝန်ထမ်းတိုင်းကို တန်ဖိုးကြီးနာရီဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် ကားသစ်လည်းမဲဖောက်ကာကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အဂူရို
The Athletic ရဲ့ဖော်ပြချက်အရအဂူရိုဟာဝန်ထမ်းအားလုံးကိုတစ်လုံးလျှင်ပေါင်၁၆၅၀တန်ဖိုးရှိ Tag Heuer of Hublot နာရီမော်ဒယ်များဝယ်ယူလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နာရီအလုံးတိုင်းမှာ Gracias! Kun Aguero ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူးဟာRange Rover Evoque ကားတစ်စီးကိုမဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယင်းကားကိုအဂူရိုနဲ့အလွန်ခင်မင်တဲ့အမည်မဖော်လိုသူဝန်ထမ်းတစ်ဦးကမဲဖောက်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
မန္စီးတီးဝန္ထမ္းတိုင္းကို တန္ဖိုးႀကီးနာရီဝယ္ေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ကားသစ္လည္းမဲေဖာက္ကာေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ခဲ့တဲ့အဂူ႐ို
The Athletic ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရအဂူ႐ိုဟာဝန္ထမ္းအားလုံးကိုတစ္လုံးလွ်င္ေပါင္၁၆၅၀တန္ဖိုးရွိ Tag Heuer of Hublot နာရီေမာ္ဒယ္မ်ားဝယ္ယူလက္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။နာရီအလုံးတိုင္းမွာ Gracias! Kun Aguero ဆိုၿပီးေရးသားထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္အာဂ်င္တီးနားတိုက္စစ္မႉးဟာRange Rover Evoque ကားတစ္စီးကိုမဲေဖာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ယင္းကားကိုအဂူ႐ိုနဲ႔အလြန္ခင္မင္တဲ့အမည္မေဖာ္လိုသူဝန္ထမ္းတစ္ဦးကမဲေဖာက္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ယူရို၂၀၂၀ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ပေါင်၃၁၀၀၀တန်အံ့ဖွယ်မွေ့ယာကို လျို့ဝှက်လက်နက်အဖြစ် စပိန်အသုံးပြုနေ
ယူရိုလူစာရင်းမှချန်လှပ်ခံရပေမယ့် ဩစတြီးယားနှင့်ပွဲမှာ လင်ဂတ်ပွဲထွက်လာမည်